Lapel Pin, Sport Menduru, Metal Keychain - Kingtai
Kingtai chigadzirwa chigadzirwa chakashomeka kambani, Iyo china Yakakurumbira simbi yekugadzira michina, iyo inobata makore anopfuura makumi maviri akasiyana emhizha ekugadzira zviitiko, kubatanidzwa kwayo kwakazara kweindasitiri nekambani yekutengeserana, nekudaro isu tine ese ari maviri akakura dhizaini boka uye bhizinesi timu.
Zvidimbu zvakakosha Mari yedu Yekuyeuchidza mari yakanaka zvisingaite uye akakosha matiketi, anogona kuva ter ...
Zvakanakisa Zvishandiso Iyi menduru yakakwana kune "akacheka-kunze" mavara emavara kana dhizaini ine dimens ...
Zvidimbu zvakakosha Yedu kufa-kukanda tsika lapel pini ine 3D mhando, iyo inowanikwa mune chero brigh ...
Uine makore anopfuura gumi ane ruzivo mune zvesimbi zvigadzirwa uye mhizha zvigadzirwa kugadzira, isu tine yakazara-yekumira sevhisi, kubva dhizaini kune akapedza zvigadzirwa, kuti iwe ugone kuzorora uine chokwadi.
Kubva payakatanga, marezinesi uye patent yatakatora inodarika zvidimbu makumi matatu, akati wandei ari Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA uye ISO9001.
Kingtai chigadzirwa chigadzirwa chakashomeka kambani, iyo yakabata makore anopfuura makumi maviri akasiyana ekugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi, kubatanidzwa kwayo kwese kwemaindasitiri nekambani yekutengeserana, nekudaro isu tine vaviri vakura dhizaini dhizaini uye bhizinesi timu.
KingTai yanhasi iri kushanda nevatengi-yekutanga chinangwa chebasa, uye yatora chikamu muCanton Fair neHong Kong Exhibition kwemakore mazhinji. Isu Tinopa sechokwadi sevatengi, uye tinoramba tichivandudza nekutenda kwezvakanaka zvehupenyu zvisikwa